जमाना डिजिटल सिग्नेचरको ! यसको महत्व र सहज लिने प्रक्रिया यस्तो छ – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी रिपोर्ट / जमाना डिजिटल सिग्नेचरको ! यसको महत्व र सहज लिने प्रक्रिया यस्तो छ
ICT Khabar/आइसिटी खबर March 26, 2018	आइसिटी रिपोर्ट, लेख/बिचार विवेचना Leaveacomment 731 Views
विद्युतीय हस्ताक्षरको भनेको ‘डिइमेटेरियलाइज’ अर्थात भौतिक हस्ताक्षरलाई कागजरहित बनाउने भन्ने हो । विद्युतीय कारोबारमा कुनै पनि कागजातको प्रयोग गर्नु पर्दैन । डिम्याट फर्ममा भएको हुनाले यो मान्य हुन्छ ।
डिजिटल सिक्नेचर भनेको हामीले हस्ताक्षर भनेको हामीले गरेको भौतिक हस्ताक्षरलाई स्क्यान गरेर प्रयोग गर्ने होइन । यो पब्लिक कि इन्फ्रास्टक्चर (पीकेआई) बाट निर्माण हुने सिग्नेचर हो ।
विद्युतीय हस्ताक्षर शुरु भएसँगै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार कम्प्युटरबाट हुने सबै काम कारबाही विद्युतीय हस्ताक्षरको माध्यमबाट हुनेछ । हस्ताक्षर गर्दा आइपर्ने समस्या समाधानको लागि विद्युतीय कारोबार नियामावलीमा थप घट गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
कुनै पनि कागजात आधिकारिक हो भन्ने बनाउनको लागि डिजिटल सिग्नेचर तथा सर्टिफिकेटको आवश्यक पर्छ । यसको लागि सरकारले केही कम्पनीलाई हस्ताक्षर जारी गर्न सक्ने लाइसेन्स दिएको हुन्छ । ति कम्पनीलाई आवश्यक कागजात तथा तोकिएको शुल्क दिएर हस्ताक्षर दिन सक्छन् ।
कतिको सुरक्षित हुन्छ डिजिटल सिग्नेचर ?
पीकेआई इन्फ्रास्टरबाट बनेको सिग्नेचर कम्तिमा पनि २ हजार ४८ बिटमा निस्कन्छ । एक बिटमा ८ वटा अंक वा अक्षर हुने हुँदा कम्तिमा पनि १६ हजार ३२८ वटा अंक र अक्षरको समिश्रणबाट पासवर्ड बनेको हुन्छ । यतिका लामो पासवर्डलाई ह्याक गर्न सुपर कम्प्युटरको प्रयोग गर्याे भने पनि कम्तीमा १० हजार वर्ष लाग्छ , विद्युतीय हस्ताक्षरको काम गर्दै आएको कम्पनी नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीका अध्यक्ष विप्लवमान सिंह भन्छन्।
यतिको सुरक्षित पासवर्ड निस्कने बेलामा दुई थरिका ‘कि’ निस्कन्छ । पब्लिक कि अरुलाई शेयर गर्न सकिन्छ भने प्राइभेट कि व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हो । यदी कसैको पब्लिक कि राखेर इमेल पठाउँदा इमेल खोल्नको लागि प्राइभेट किको प्रयोग गर्नुपर्छ । यस हिसाबले पनि यो सुरक्षित रहेको छ । त्यस्तै हस्ताक्षर खोल्दा इन्सक्रिप्सन राख्ने या नराख्ने भन्ने सुविधा पनि कम्पनीले प्रदान गरेको हुन्छ । यो राखिएको खण्डमा कि अझै सुरक्षित हुन्छ ।
त्यस्तै, प्रयोगकर्ताले सिग्नेचरको लागि पासवर्डजस्तै ‘कि’ पाउँछन् । त्यो कि माइक्रोसफ्ट वर्ड, पीडीएफ फाइल, एक्सेल, नोटप्याड आदिमा हुने सिग्नेचर लाइनमा ‘ड्रर्याग’ गरेर पेस्ट गरेपछि उक्त फाइल फम्र्याटहरु लक हुन्छ ।
सिग्नेचर गरेर सो फाइल कसैलाई पठाउँदा बदमासी गर्याे भने सो फाइल खोलेपछि ‘चेतावनी’ दिन्छ साथै कुन पेजमा कुन शब्द थप गरिएको छ भन्ने जानकारी पनि दिन्छ । भौतिक फाइलमा कुनै कुरा सच्याइएको छ भने त्यो थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ ।
कसरी लिने डिजिटल सिग्नेचर ?
डिजिटल सिग्नेचर लिनको लागि विद्युतीय कारोबार ऐनको अनुसूची ५ अनुसारको सूचना तथा जानकारी डिजिटल सिग्नेचर प्रदान गर्ने आधिकारिक कम्पनीलाई दिनुपर्छ । साथै तोकिएको शुल्क पनि तिर्नुपर्छ । शुल्क त्यति महँगो पनि छैन ।
नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीले लिने शुल्क
कारोबारलाई विश्वसनीय, कानुन सम्मत र सुरक्षित बनाउनको लागि डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गरिन्छ ।
अनलाईनबाट फर्म बुझ्ने संस्था तथा कम्पनीहरुमा अनलाईनबाटै आवेदन दिन सकिने
कागज, मसी, टोनल कार्टेजलाई बचाउन सकिन्छ । यसले वनबिनास हुन रोक्छ ।
कागजातको भण्डारणमा अनावश्यक खर्च नहुने
कागजको आयातलाई निरुत्साहित गर्न
चाहिएको समयमा तुरुन्तै पाइने
यसको एउटा उद्देश्य भनेको जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने पनि हो ।
‘एनिह्वेर अफिस’ को कन्सेप्टको लागि पनि यो महत्वपूर्ण छ ।
Source : Aarthiknews.com
Previous मापसे सेवन गरे नचल्ने बाइक बुटवलका युवाले बनाए
Next पछिल्लो अपडेट – नेपालमा फेसबुक बन्द गर्ने, कारण यस्तो छ
काठमाडौँ : के तपाइँ सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउने बानि छ ..? एदी छ भने आजै ...